Minisitra Blanche Nirina Richard “Tsy hasiana 2ème session izany ny bakalorea teknika »
Fanadinana BEPC Nampian’ny polisy ilay tovovavy tsy salama tampoka
Tovovavy mpiadina iray no tsy salama omaly maraina raha nanatrika ny fanadinam-panjakana BEPC tao amina foibem-panadinana iray teto an-drenivohitra.
Niteraka resabe teto amintsika andro maromaro lasa izay ny amin’ny tokony handraisan’ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra ny amin’ny hanaovana « 2 eme séssion » ihany koa ho an’ireo nanala ny baka teknika farany teo.
Nambaran’ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony omaly Rtoa Blanche Nirina fa ny bakalôrea ankapobeny ihany no hanaovana izany noho ny fisian’ilay laza adina mialoha nivoaka na ny “fuites de sujet”. Ny baka teknika, hoy hatrany ny minisitra, tsy nisy fa ny laza adina nifandiso no nisy teny amin’ny lisea teknika Alarobia, antony nanemorana kely ny andro tokony hiatrehan’ireo mpiadina ny fanadinana. Ny alatsinainy teo anefa dia nisy ny karazana fitakiana nataon’ireo mpampianatry ny teknika amin’ny tokony hisian’ny « 2ème session » ho an’ireo mpianatra, ka nahatonga azy ireo tsy nitsara ny laza adina. Omaly vao nirosoana ny fitsarana. Efa vonona tanteraka moa ity minisitera ity amin’ny fiatrehana io fanadinana bakalôrea 2 eme séssion hotanterahina ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra ho avy izao io, daty izay nantitranterin’ny minisitra fa tsy miova hatreto. Mikasika ny olan’ny SECES manokana dia nomarihiny fa aorian’ny fahavitan’ny fanadinana Bakalôrea 2 eme séssion soa aman-tsara dia hiverina hifampidinika amin’ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny tenany hahafahana mamaha ny olana.